Ukhenketho e-Australia - Yonke into ongayibona noyenzayo | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Australia lilizwe elise-Oceania elidibanisa zombini imilingo yeekona zalo ngendlela yeelwandle, kunye nenkcubeko eyahlukileyo ekufaneleyo ukuba uyihlole. Ke iindidi zabakhenkethi zibanzi kakhulu. Nje ukuba sinyathele emhlabeni, kufuneka siye eSydney Opera House, wonke umsebenzi wobugcisa omiselwe imiboniso. Kwakhona eSydney sifumana iHort Bridge, kunye nezibuko layo, iSt Mary's Cathedral kunye neelwandle zayo.
Ukuba siya eMelbourne asinakuphuthelwa yithala leencwadi, kunye neBotanical Garden okanye intengiso yaseQueen Victoria. Ukongeza kwezi zibini zikhankanyiweyo, zininzi izixeko esingenakuzilibala kuhambo lwethu, ezinjengeBrisbane, iAdelaide, iPerth okanye iGold Coast, phakathi kwezinye.
Ewe kunjalo, ukongeza ezixekweni kunye nawo onke amakhubalo, asinakulibala indawo epaki kwaye iAustralia iyakhonzwa. Ezinye zezona zaziwa kakhulu yiNambung National Park okanye iPurnululu neKarijini. Kodwa mhlawumbi enye yezona zinto kuthethwa ngazo zihlala ziPaki yabapostile abali-12. Ukongeza kwiimpophoma zeWallaman okanye iziqithi zayo kunye neBarrier Reef. Ngaba ukhetha ukuqala phi indlela yakho?
por Isabella yenzayo Iinyanga ze11 .
IPlanethi yoMhlaba yindawo enomtsalane engaze iyeke ukusimangalisa. Ngaba uyazi ukuba e-Australia kukho ichibi ...
por maruuzen yenzayo Iinyanga ze11 .
Elinye lawona mazwe abaluleke kakhulu e-Oceania yi-Australia, ilizwe elikude namhlanje elibonakala njengendawo ekulula ukufikelela kuyo ...
Inzululwazi yase-Australia kunye nezobuchwepheshe
por ULuis Martinez yenzayo 1 ngonyaka .
Azikho izinto ezininzi zenzululwazi nezobuchwephesha zaseOstreliya ezinjengezo zafunyanwa kwamanye amazwe ehlabathi. Isizathu silula:…
Zeziphi iinkampani ezinkulu zase-Australia? Lo mbuzo unqabile ngaphandle kwesangqa sezoqoqosho esikhethekileyo. NONE
por Isabella yenzayo 1 ngonyaka .
Ukuba kwikhefu lakho elilandelayo ufuna ukuthatha uhambo oluya e-Australia okanye ungathanda ukuya kufunda kweli lizwe, ...
Imeko-bume e-Australia yahluke kakhulu kwaye ityebe kakhulu. Gcina ukhumbula ukuba sithetha ngelizwe elikhulu ...
por daniel yenzayo 1 ngonyaka .
Rhoqo ngonyaka amawaka abakhenkethi bandwendwela i-Australia ukuze bafumane isiqithi-ilizwekazi kwaye bonwabele indlela yokuphila yase-Australia. Kwaye oko…
Inja ebomvu, inja yasezidolophini
por daniel yenzayo 2 iminyaka .
Inja ebomvu yaba yenye yezona zinja zidumileyo emhlabeni njengesiphumo somdlalo bhanyabhanya «Inja ebomvu,…
Izilwanyana zase-Australia zahlukile
Esinye sezizathu ezininzi ezenza i-Australia ibe lilizwe elinomdla ngolu hlobo bubutyebi bendalo obunomtsalane. Izilwanyana ...
Abadlali abadumileyo be-tennis e-Australia
Abadlali abadumileyo be-tennis e-Australia benze ilizwe labo amandla amakhulu kwezemidlalo. Ngaphandle…
Iilwandle ezilungileyo kwihlabathi
Ukoyama ngemithi yekhokhonathi, amanzi aluhlaza kunye nesanti yegolide. Owona mfanekiso ugqibeleleyo esiwuzobayo kwiminqweno yethu yokuhamba kwaye unokuba ...
Iilwandle ezili-8 ehlabathini ezikhanya ebusuku
Amabhendi eRock yaseAustralia aPhambili